Allgedo.com » Ra’isal wasaare ku xigeenka Dalka Turkiga oo Muqdisho Booqasho ku Imaanaya
Ra’isal wasaare ku xigeenka Dalka Turkiga oo Muqdisho Booqasho ku Imaanaya
Print here| By: allgedo.com: Friday, February 22, 2013 // u Jawaab
Ra’isal wasaare ku xigeenka dalka oo Turkiga Bekir Bozdag iyo wasiirka horumarka dalkaasi Cevdet Yilmaz ayaa la qorsheynayaa inay booqasho ku yimaadaan maanta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Safarka masuuliyiintaan ka tirsan dowlada Turkiga ayaa waxaa uu qeyb ka yahay safar labo maalin ah oo la doonayo inay ku tagaan dalalka Soomaaliya iyo Sudan.
Masuuliyiintaan ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaa ay la kulmi doonaan madaxweynaha iyo Ra’isal wasaaraha dalka Soomaaliya si ay kala hadlaan arimo kale.
Sidoo kale, waxaa qorshahooda ku jiro inay ka qeyb galaan xaflada daah furka masaajido iskuul iyo xarun lagu xanaaneeyo aqoonta oo Turkiga uu ka dhisay dalka Soomaaliya.
Maalinta labaad ayaa la sheegaya wafdigaan inay booqan doonaan magaalada Khartoum iyo dhisme Sheybaar oo dowlada Turkiga ka hergilisay dalkaasi.
Dowlada Turkiga ayaa ah dowladii ugu horeysay oo dib safaaradeedii kaga furatay magaalada Muqdisho waana dalkii ugu horeeyay oo shirkad diyaaradeed ay leedahay dowlada Turkiga ay ka howlbilowday dalka Soomaaliya, waxii ka dambeeyay markii dalka uu horumarka ku tilaabsaday.